Uruguay Waxay Kordhisay Heerarka THC Xashiishadda Waxayna Tixgeliyeen U Iibinta Iibinta Dalxiisayaasha • Daroogada Inc.eu
Uruguay waxay kordhisaa nuxurka xashiishadda THC waxayna tixgelinaysaa iibinta dalxiisayaasha
Uruguay, oo sharciyeysay xashiishadda dadka waaweyn ee 2013, ayaa doonaysa THCHeerarka xashiishadda ee lagu iibiyo farmashiyeyaasha sidoo kale waxay tixgelin doonaan u oggolaanshaha dalxiisayaasha inay iibsadaan alaabada xashiishadda, sida lagu sheegay warbixin dhowaan ka soo baxday EFE.
Tan iyo 2017, dadka waaweyn ee reer Uruguay ee jira 18 ama ka weyn ayaa iska diiwaangelin kara diiwaanka dawladda si ay uga iibsadaan xashiishadda madadaalada farmashiyeyaasha gobolka shatiga u leh. Laakiin in kasta oo farmashiyeyaashu ay kaliya bixinayeen alaabada xashiishadda tan iyo 2017, naadiyada beerashada shaqsiyeed iyo beerista xashiishadda - halkaas oo ilaa 45 qof oo qaangaar ah oo diiwaangashan ay wadaagi karaan meel ay ku koraan kuna cunaan xashiishadda - ayaa la heli jiray tan iyo 2014.
Farmashiyeyaasha ayaa hadda iibiya laba nooc oo xashiish ah, oo loo yaqaan ALFA iyo BETA, oo ka kooban qiyaastii 9% THC iyo 3%, siday u kala horreeyaan. CBD ku jira Saraakiisha ayaa rajeynaya in marka la kordhiyo maadada THC ee xashiishadda ganacsi ahaan la heli karo, alaabtu ay si fiican ula tartami doonto kuwa ku koray Mareykanka, sida lagu sheegay warbixinta. naadiyada xashiishadda, kuwaas oo leh celcelis ahaan THC oo ka kooban qiyaastii 20%.
Marka laga hadlayo iibinta dalxiiska, Daniel Radio, xoghayaha guud ee Golaha Daroogada Qaranka Uruguay, ayaa sheegay horraantii toddobaadkan in isbeddel uusan u muuqan inuu dhaqan galo xilligan dalxiiska, laakiin uu baran doono saamaynta ka dhalan karta u oggolaanshaha booqdayaasha caalamiga ah ee dalka inay iibsadaan alaabada xashiishadda, oo ay kujirto sida ay kor ugu qaadi karto rafcaanka guud ee dalxiiska ee Uruguay.
Uruguay wuxuu noqday waddankii ugu horreeyay adduunka ee xalaaleeya xashiishadda dadka waaweyn 2013 -kii markii uu hoggaaminayey Madaxweynihii hore José Mujica.
Ilo ay ka mid yihiin GanjaPreneur (EN), Mugglehead (EN, NewsBudz (EN), SwissInfo (ES)
Ma jiraa hab nabdoon oo lagu cabbo xashiishadda cannabis? Isbarbardhiga hababka.
Haddii aad raadineyso sida ugu caafimaadsan ee loo cabo xashiishadda, xaji ...
Dad badan ayaa u diidi doona 'saamaynta ku xeeran' olole suuqgeyn si kor loogu qaado xashiishadda. Laakiin cusub…